mysteryzillion.org သို ့တောင်းဆိုချင်တာလေးများ — MYSTERY ZILLION
mysteryzillion.org သို ့တောင်းဆိုချင်တာလေးများ
May 2010 edited July 2012 in About Forum
ဖိုရမ်ဘာတွေ ရွေ ့လျှားနေလဲ
ကျွန်တော် ဒီတော့ပစ်လေးကိုဖွင့်လိုက်ပါတယ် ။
Technology မေးခွန်းတွေမမေးရဘူးနော် ။
MZ ကလုပ်နေတဲ့WiKi အကြောင်းကိုတော်တော်သိချင်သဗျ။
နောက်ပြီးတော့ တစ်ခြားဖိုရမ်တွေလို anniversary journal လေးတွေလုပ်ဖို ့အစီအစဉ်လေးများရှိမရှိ ။
ရှိပါက How ဘယ်လို Who ဘယ်သူတွေက what ဘာကို ဘယ်လိုလုပ်နေကျလဲဆိုတာသိချင်ပါတယ်။
ထို ့နောက် MZ ဖိုရမ်ရဲ ့သမိုင်း မှတ်တိုင်များ(Monuments)အားလုံးကိုဖြေပြီးသားရှိနေပါက တောင်းပန်တယ်လို ့ပြောရင်း။
တစ်နေရာထဲ သတင်းရသပြည့်စွာဖတ်စေချင်တဲ ့စေတနာနဲ ့
လောလောဆယ် တော့ ဂျာနယ် လုပ်ဖို့ တော့ မရှိသေးဘူးထင်တယ်ဗျ စေတန်လဲ မအားဘူးထင်တယ် ဒီဖိုရမ်လေး စကတည်းက ကွန်ပြူတာ အခြေခံ ကနေစပြီး ဘယ်သူ့ကို ဖြစ်ဖြစ် အဓိက အသုံးပြုသူတွေ လေ့လာသူတွေရဲ့ အခက်အခဲ ကို တက်နိုင်သလောက် နည်းပညာပိုင်းသီးသန့်လေးကို ကူညီဖို့ ရည်ရွယ်ခဲ့ ပါတယ်
ဒါကြောင့်မို့လို့ ဘယ်သူက ဘာလုပ်ရယ်လို့ အတိအကျတော့ ကျနော်သိသလောက်မရှိဘူးဗျ လုုပ်နိုင်တဲ့ သူက လုပ်နိုင်သလောက်လုပ်ပဲ ။
ပြောရရင်တော. လက်တွဲဆွဲခေါ်မှုပါပဲ ။ ဥပမာ ပေးရရင်တော. နိုင်ငံရေးမလုပ်ဖူးတဲ. သူတစ်ယောက် စိတ်ပါ၀င်စားစွာနဲ. နိုင်ငံရေးလောကထဲကို ၀င်ရောက်လာတယ် ။ ဒါပေမဲ. ၀ါရင်. သမ္ဘာရင်.တွေက နိုင်ငံအရေးတွေ ကြီးကြီးမားမားတွေ ပြောချလိုက်ပြီး вЂњငါလုပ်မယ်ဟေ.вЂќ ဆိုပြီး အားခဲထားတာတွေကို တစ်ခါတည်း သတ်ချလိုက်သလိုပဲ ။ ဘယ်လိုမှ ခေါင်းမထောင်နိုင်တော.သလို စိတ်ဓာတ်ကျသွားအောင် လုပ်ချပလိုက်သလိုမျိုးပဲ ။
မန်ဘာအသစ်တွေက ရှိနေပြီးသား အသိုက်အ၀န်းတစ်ခုကို ၀င်တိုးမယ် ဆိုတဲ. အကြံလေးနဲ. ငါ.တော. ရှိသမျှ အင်အားလေးနဲ. တော. လုပ်ကြည်.လိုက်မယ် ဟဲ. ဆိုပြီး ကြုံး၀ါးထားသမျှကို ဆောင်.ကန်ခံလိုက်ရသလိုပဲ ဖြစ်နေပါတယ်။
ကျွန်တော်လည်း ကျွန်တော်မြင်တာလေးကို ပြောတာပါ။ မကျေနပ်ကြရင်လည်း ကြိုက်သလို လုပ်နိုင်ပါတယ်။
ပြောရရင်တော. လက်တွဲဆွဲခေါ်မှုပါပဲ ။ ဥပမာ ပေးရရင်တော. နိုင်ငံရေးမလုပ်ဖူးတဲ. သူတစ်ယောက် စိတ်ပါ၀င်စားစွာနဲ. နိုင်ငံရေးလောကထဲကို ၀င်ရောက်လာတယ် ။ ဒါပေမဲ. ၀ါရင်. သမ္ဘာရင်.တွေက နိုင်ငံအရေးတွေ ကြီးကြီးမားမားတွေ ပြောချလိုက်ပြီး “ငါလုပ်မယ်ဟေ.” ဆိုပြီး အားခဲထားတာတွေကို တစ်ခါတည်း သတ်ချလိုက်သလိုပဲ ။ ဘယ်လိုမှ ခေါင်းမထောင်နိုင်တော.သလို စိတ်ဓာတ်ကျသွားအောင် လုပ်ချပလိုက်သလိုမျိုးပဲ ။
ကျွန်တော်သိပ်မရှင်းလို ့ပါခင်ဗျာ အသေးစိတ်လေးပြောပြပေးပါ
I am not so clear with this please Ko Malware com Let me know clearly.
ကို malware con ပြောချင်တာကို ကျွန်တော် သဘောပေါက်တယ် ခင်ဗျာ။ သူပြောတာက ရှင်းပါတယ်။ အဖွဲ့ တစ်ခု ထဲကို လူအသစ် အနေ နဲ့ ရောက်ရှိလာ တဲ့ လူကို ၊ အဖွဲ့ အတွင်းမှာ ရှိတဲ့ ဝါရင့် အတွေကြုံ ရှိတဲ့ လူများ က အဲ့ လူသစ် ရဲ့ လုပ်ဆောင်ချက် တွေကို ...........။ အဲ့လို ဆိုပြီ တွေးလိုက် ရင်တော့ အဖြေ ထွက်လာ သလိုပဲ။ (ကျွန်တော် အထင်ပါ။)
@Erase Thanks So Much
you should say clearly.Ko Malware.